Nhau - Resin bond diamond polishing pads
Resin chisungo nedhaimani makorari Mapedhi tiri chimwe chezvinhu zvedu zvikuru zvigadzirwa, tanga tiri mune ino indasitiri kweanopfuura makore gumi.
Resin chisungo makorari Mapedhi zvinoitwa nekusanganisa nekujovera jekiseni poda, resin, uye zvinodzadza zvobva zvapisa-zvakatsindirwa pane yekudzvinyirira, uyezve kutonhodza uye kudonhedza pasi kuti vagadzire iro rinoshanda rekugaya.
Resin yakasungwa matrix ndeye iyo iwe yaunozoona kushandiswa kwemarudzi ese ezvinhu. Kunyangwe aya mapads ekumeso anotaridzika zvakafanana iwo akasiyana zvakanyanya. Muchokwadi kuwanda kwemadhaimondi, kuomarara kwesimbi yakasungwa uye pateni iri pamusoro zvese zvinoita basa mukuita.
Mhando dzese dzakasiyana dzinotamba chinzvimbo mune chaiwo hunhu hunodiwa kumatombo ekupukuta matombo. Semuenzaniso, rimwe dombo rakapfava uye rimwe rakaoma. Nekudaro, iyo padhi yekupukuta iri kuzopfeka zvakasiyana kana ichishandiswa pamarble pane zvayaizoita painoshandiswa pane quartzite kana granite. Zvakadaro zvakadaro, mumwe murume akagadzira zvinhu senge quartz ine mamwe maitiro anoda kutariswa. Semuenzaniso, kugadzira kupisa kwakanyanya panguva yekupora kunogona kukonzera kumaka kuitika padombo.
Nezvikonzero zviri pamusoro uye zvimwe, iwe unowana akawanda marudzi epolishing pads. Nhanho polishingPads, 5 Nhanho makorari Mapedhi, uye7 Nhanho makorari Mapedhiingori mashoma eaya maitirwo ekuti polishing pads inopihwa. Ikozve kune polishing mapads akagadzirirwa quartz uye mamwe akagadzirwa kuti akupe iwe kugona kuomesa polish. Chimwe nechimwe cheizvi chine chisungo chakaomarara, kuverenga kwemadhaimani, uye nemitengo yemitengo. Pfungwa yacho ndeyekuti iwe unoda kuona kuti ndeapi map (s) anoshanda zvakanyanya pamushini wako (s).
Naizvozvo, ndapota shingairira kuomarara kwepasi, uye nzira dzekumonyoroka (dzakaoma kana dzakanyorova) iwe dzaunofarira pakutanga, ipapo uchazokwanisa kusarudza chaiyo polishing mapedhi.